Oromo Views & Headline News: Ibsa WBO ZK Keessaa Ilaalchisee Ibsa ABO
Ibsa WBO ZK Keessaa Ilaalchisee Ibsa ABO
Waraanni Bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa seenaa keessa dabree as gahee dheeraa fi bal’aa akka qabu hubatamaa dha. Bu’ureeffamuu zooni kanaa bara 1993 irraa kaasee haga har’aatti danqaa fi gufuu hedduun kan isa muudate yeroo tahu humnoti adda addaa dhuunfachuuf marraa baayyee hawwatanii, diinni WBO zoonichaa dhabamsiisuuf humna biyya ollaa of gargaarsisee duula bal’aa itti banee akka ture yaadanno kaleessaa ti. Deemsaa fi tahinsoti zoonii kana keessatti mul’atanii fi tahaa jiran akka seenaan galmeessu shakkiin hin jiru.
WBO Zoonii Kibbaa keessaa kanneen ibsa Onkolooleessa 12, 2009 baasan deemsa jajjabeefamuu qabuu dha. Adeemsi kun kan suduudan ykn karaa sirriitti qiyaafate tahuus galii isaa rukutuu kan dendeyu tartiiba sirnaa hordofuudhaan kan hojjatamu akka tahetti amanama. Kanas ABO waliin irratti hojjatuuf qophii tahuu ibsina.
ABOn yeroo adda addatti murnoota dhaaba irraa bahan wajjin araarri bu’ee ABO dhiinsuun, humneessuuf, gurmuu qabsaawotaa walitti deebisuuf, yaada araaraa maanguddotii fi bu’ureessittooti dhaabaa dhiheessan gammachuun fudhatee, koree itti utubee akka milkaawuuf tattaafataa jira. WBO ZK keessaa ibsa isaa keessatti yaada araaraa kana fudhachuu fi deggeruu isaa labsuun yaada deggeramaa dha.
Deemsi WBO ZK keessaa amma agarsiisaa jiru kan deggeramu tahuus asumatti kan dhaabbatu osoo hin taane rakkinni dhalate furamee akka sirnatti deebi’amu akka hojjatan abdii keenya.
Dhumarratti, murnoota maqaa ABO himatan hundaa fi ABO giddutti araarri akka bu’uuf yaaliin maanguddotii fi bu’ureessitooti dhaabaa jalbqaban milkaawee akka galii isaa gahu godhuu irratti ABO waan danda’u hundaa akka hojjatu beeksifna. Deemsi araaraa jalqabe kun akka bakka gahuuf miseensi, waraanni, deggeraa fi ummatni Oromoo bal’aan akka karaa hundaan bira dhaabbattan waamicha keenya dabarsina.
ShG GS ABO
Onkoloolessa 20, 2209
Posted by Oromia at 10:04 PM
Labsa GABUO Damee Toronto